Burundi oo isaga baxday xubin-nimada Maxkamadda ICC-da | Baydhabo Online
Burundi oo isaga baxday xubin-nimada Maxkamadda ICC-da
Baarlamanka Dalka Burundi ayaa Cod aqlabiyad ah ku meel mariyay inuu Dalkaasi isaga baxo Maxkamadda Caalamiga ah ee ICC (International Criminal Court) oo uu fadhigeedu yahay Magaalada Hague ee Dalka Holland.
Arrintan ayaa timid, markii ay dhawaan Qaramada midoobay sheegtay inay baarayso gabbood fallo la sheegay inay Dowladdu geysatay, xilligii ay Dalkaasi ka socdeen qalalaasaha Siyaasadeed.
94 Mudane oo ka tirsan Xildhibaannada Dalkaasi ayaa u codeysay haa, waxaa diidday Laba xubnood, halka 14 mudane ay ka aamustay inay dhanna raacaan, waxaana tallaabadan soo dhoweeyay Madaxweynaha Dalkaasi, Pierre Nkurunziza.
Xeer ilaaliyaha Maxkamadda dembiyada Caalamiga ah,haweeneyda lagu Magacaabo ,Fatou Bensouda, ayaa sheegtay inay Bishii April ee Sanadkani Sameeyeen baaritaanno hor dhac ah, kuwaasoo ay ku ogaadeen inay jiraan tacaddiyo ka dhan ah rayadka oo ay ka mid yihiin, dil, Kufsi iyo jirdil, waxaanay eedeyntaasi dusha ka saartay xubno ka mid ah Dowladda Burundi.
Golaha wasiirrada Dalka Burundi ayaa horraantii Bishan ku dhowaaqay, Bujumbura inay qorsheysay ka bixista Maxkamadda Caalamiga ICC, taasoo ay horay ugu ololeynayeen qaar ka mida waddamada bariga Afrika.